Misa Ukwakha Isoftware YeCrappy - Isoftware Ehlanganisiwe Isazuza | Martech Zone
NgoLwesibili, Septhemba 25, 2012 NgoLwesibili, Septhemba 25, 2012 UChris Lucas
Nakhu okungaphakathi kwama-CIO kanye namaqembu akho wangaphakathi wezobuchwepheshe angafuni ukuthi wazi, ukuqaliswa kwesoftware yezinyanga eziyi-18 okubiza nje u- $ 500K - $ 1MM kungenziwa isihogo eshibhile kakhulu… futhi kufanele kube njalo. Bakha ukuphepha kwemisebenzi ngoba abaholi abaningi bezinga le-C nabathengisi abaqondi ukuthi ubuchwepheshe bungasebenza kanjani futhi kufanele busebenze kanjani.
Njengabakhangisi sonke sifuna isoftware elingana nenyathi. Lowo owenzayo ukuhola isizukulwane, ukudala okuqukethwe, ukufaka amagoli okuhola, ukwenziwa kokuguqulwa… oh, yebo, futhi une- analytics ungqimba ngaphezulu kwawo. Futhi, njengabakhangisi nabachwepheshe bezobuchwepheshe, sifuna ukuyokwakha isoftware ngoba siqinisekile ukuthi asikwazi ukukuthola esikudingayo. Iqiniso, nokho, ukuthi singathola cishe amaphesenti angama-90 walokho esikudingayo uma singayeka ukufuna i-unicorn “kuzixazululo” ezibizayo, ezingabizi kakhulu bese siqala ukubheka izinhlelo zokusebenza zewebhu ezihlanganisiwe ngentengo encane yezindleko.
Ngakho-ke yini okufanele uyibheke lapho usebenzisa izinhlelo zokusebenza zewebhu ezihlanganisiwe? Nazi izinto ezi-3 eziphezulu okufanele uzibheke:
1) Hlanganisa Ngokukhululekile
Noma ngabe ubheka abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili, isoftware yokubalwa kwemali, noma yini ephakathi, kufanele ubheke insizakalo ehlangana ngokukhululeka. Kungani? Ngoba kusho ukuthi insiza izokuvumela ukuthi usebenzise idatha yakho ngendlela ofuna ngayo. Imfihlo yokusebenzisa noma iyiphi insizakalo ukuqonda ukuthi umgomo owodwa oyinhloko - idatha ingeyakho, hhayi isevisi. Inkampani efuna ukuhlanganiswa nenqwaba yezinsizakalo iyakuqonda lokhu bese yenza ukusetshenziswa kwensizakalo yabo kube lula kakhulu.
Noma ungeyena unjiniyela futhi ungakaze uzwe ngokuvulwa API kufanele ubheke izinsizakalo ezinama-API avulekile. Isizathu silula, ama-API avumela noma ngubani ukuthi akhe izinsizakalo nemikhiqizo ngaphezulu kohlelo lwabo lokusebenza. Kungani lokhu kubalulekile? Isizathu esisodwa esikhulu ukuthi ivumela ukusetshenziswa kobuciko kohlelo lokusebenza oluyisisekelo. Noma ngubani angafika akhe insiza ewusizo engavala imbobo noma ikunikeze ithuba elengeziwe. Esinye isizathu esikhulu ukuthi UNGAKHELA phezu kwakho. Uyakhumbula ukuthi i-unicorn engikhulume ngayo phambilini? Uma wena noma insiza kanjiniyela unezinto chops technical, ungakha phezu kohlelo lokusebenza, noma usebenzise idatha ngendlela ofuna ngayo. Ama-API avulekile anikeza unjiniyela uhlaka lokusebenza asebenze kulo futhi akwenzi ukuthi ube nokwakha noma ukwakha kabusha insiza.
3) Umphakathi osebenzayo
Enye yezinto ezihlaba umxhwele engizibonile zisebenza kule mboni ukuthi izinkampani / izinhlelo zokusebenza ezamukela umqondo wokuhlanganiswa zinomsebenzisi onempilo, osebenzayo, nophilayo. Yebo, ezinye zinempilo kakhulu kunezinye, kepha izinkampani eziningi ezamukela umqondo wokuxhuma zinesisekelo somsebenzisi esifuna ukuxhunyaniswa. Kungani kubalulekile ukuthola izinhlelo zokusebenza ezinale vibe yomphakathi? Ngoba izinhlelo zokusebenza eziningi ezinalokhu futhi zikhula kuhlelo lwazo lokusebenza, lalela impendulo yamakhasimende, futhi ngokuvamile inezikhuthazo zokuqhubeka nokugcina nokukhulisa leso sisekelo somsebenzisi. Izinhlelo zokusebenza eziningi ezimile ziyayeka ukuphindaphindeka noma ziphindaphindwe kanye noma kabili ngonyaka. Ufuna ukuthola izinhlelo zokusebenza ezithuthukisa njalo futhi ezikhipha ukuhlanganiswa okusha, ngaleyo ndlela zikuvulele amathuba amaningi.
Lezi akuzona ukuphela kwezinto okufanele uzibheke kepha kokuhlangenwe nakho kwami ​​zikhombisa izimpawu zohlelo lokusebenza oluhle. Izinhlelo zokusebenza ezihlanganisiwe zingakusiza ukongela isikhathi, imali, nekhanda. Ukubheka ukwakha i-unicorn kungumyalezo wesiphukuphuku, ikakhulukazi lapho ungathola izinhlelo zokusebenza ezimbalwa ezihlanganiswe ngokuqinile ezixazulula iningi lezidingo zakho.
Sazise ukuthi yiziphi ezinye izinhlelo zakho zokusebenza ezihlanganisiwe eziyizintandokazi ezingezansi.
Iselula ne-Your Supercharged Sales Force
Sep 25, 2012 ngo-9: 16 PM
Ngihlala ngimangazwa izingcaphuno kanye nesikhathi esibekwa amaklayenti ethu kwesinye isikhathi esinikezwa amaqembu abo e-IT kwamanye amaphrojekthi. Ubungeke ukusho kangcono… isoftware ethembekile, ephephile futhi eqinile kulula kakhulu kunangaphambili.